Maitiro ekuhwanda otomatiki kana kuratidza yepamusoro menyu bar Mac | Ndinobva mac
Isu tese tinoziva kuti Apple ichiwedzera kutibvumidza isu kuti tiite shanduko zhinji kune inoenderana neMac yedu uye imwe yeshanduko yave ichiwanikwa mu macOS kwenguva yakareba ndeiya otomatiki kuvanza kana kuratidza yepamusoro menyu bar.
Izvi zvakafanana chaizvo nezvatingaite neDock, kuti isu tine sarudzo inowanikwa kuti tigare tichizviviga uye izvo chete inoratidzwa kwatiri kana isu tichifambisa pointer kuenda pasi kubva pachiratidziri. Zvakanaka, nebara repamusoro isu tinogona kuita zvakafanana.
Mune ino kesi, iyo gadziriso inogadzirwa zvakare kubva kuSystem Preferences, asi kubva kune imwe menyu iri kunze kweDock. Kuti tiite izvi isu tinongofanirwa kuwana Sarudzo dzeSystem> General uye isu tichawana chikamu chatinogona kumaka kana kusainura icho chinoti: «Viga uye uratidze bhawa remenu otomatiki»
Mune iyo yepamusoro skrini iwe unogona kuona iyo yakajeka yeiyi sarudzo. Nezve izvi, iyo yepamusoro bhaa mairi marinowanikwa: Tsvaga, Faira, Shanduro, Kuona, Nhoroondo, nezvimwe, ichavanzwa uye inobvumidza mushandisi kuve nekuwedzera kutaridzika kwescreen kwemamwe windows kana maapplication atakavhura. Patinoturika pamusoro pemenu nesarudzo idzi dzinozoonekazve.
Pane kupokana, iyi sarudzo ine chikamu chisina kunaka kwandiri uye ndiko kuti kupinda kwakananga kuzvikumbiro zvatinazvo mubhawa repamusoro, iyo nguva nevamwe, zvakavanzwawo. Izvi ndezve kuravira asi ini ndinoda kuona iwo ese mapfupi uye ndive nawo padyo pane kufambisa uye kumirira kuti vaoneke sezvo mamwe mafomu angu anopa mamiriro ekunze kana akafanana akagadziridzwa panguva ino uye hazvidiwe kuti uwane zvakananga ivo. Chero zvazvingaitika, iri inonakidza macOS sarudzo yataida kugovana nemi mese uye kunyanya nevaya vachangosvika pa macOS.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Tutorials » Maitiro ekuhwanda otomatiki kana kuratidza yepamusoro menyu bha paMac
Ongororo Kamera, Mhete Inotarisisa Cam Bhatiri. Iyo inotonhorera isina waya kamera